Maxay ahayd Magaca Aasaasiga ah ee Masters Tournament?
Ma ogtahay in tartanka Masters-ka had iyo jeer looma magacaabin "The Master"? Waxay laheyd magac ka duwan marka tartanku ka soo baxay 1934. Maxuu ahaa magaca asalka ah?
Masters Waa Asal ahaan 'Adventure National Augusta'
Markii markii ugu horeysay ee tartanka Masters lagu ciyaaro 1934, magaceedu wuxuu ahaa "Augusta Invitation Tournament National." Maqaalka barnaamijka tartanka loogu talagalay midka koowaad, erayada "First Tournament Invitation" ayaa ka muuqday astaanta Augusta National Golf Club.
Bobby Jones wuxuu ahaa xiddigga kubadda cagta ee Augusta National Club ee Clifford Roberts. Roberts wuxuu ahaa mid aad u badan, oo ah ninka xawaaladda, halka ninka Jones uu ahaa mid aad u tiro badan, inkastoo ay ahaayeen aragti la wadaago.
Ka dib markii ay ku guuldareysteen in ay US Open u doortaan kooxdooda cusub, Jones iyo Roberts ayaa go'aansaday inay qabtaan tartankooda gaarka ah - waxa aan hadda og nahay Masters. Tani waxay ahayd inta lagu guda jiro Duufiska weyn, xusuusnow, naadiyada golf-yada cusubi way yar yihiin - kuwa guuleysta waa kuwo aad u yar. Koobka tartanka waxaa martigeliyay Jones oo u dabaaldegay goolashiisii ​​ciyaaraha kubbadda cagta waxaana uu abuuri doonaa taageerayaal weyn - iyo, laga yaabee, ganacsi cusub - ee Augusta National.
Laakiin waxa ay isku khilaafsan yihiin bilowga tartanka loogu yeero tartanka.
Roberts waxa uu doonayay in uu ugu yeero "Masters" oo ka soo jeeda. Jones, si kastaba ha noqotee, ayaa udubdhexaadiyay, oo rumaysan in magacu ku kalsoonaan karo, xitaa mid xor ah. Jones ayaa ka adkaaday muddada gaaban, 1934-kii tartankana waxaa loo bixiyay tartankii martigelinta ee Augusta.
Dib-u-magacaabo Magaca Masters
"Augusta Invitation Tournament" ayaa ahaa magaca dhacdada 1934, 1935, 1936, 1937 iyo 1938.
Laakiin si dhakhso ah ka dib markii xaflad lagu dhawaaqay 1934, sida laga soo xigtay Masters.com, tartanku wuxuu bilaabmayaa in loo yaqaan "The Masters" si aan rasmi ahayn, labada golf iyo taageerayaalba. Sanadihii dhowrka sano ee soo socda, Jones 'mucaaradka magaciisa ayaa la xidhay.
Ugu dambeyntii, 1939, oo leh Jones 'barakadiisa, magaca tartanka waxaa si rasmi ah loogu badalay tartanka Masters.
Ku noqo Masters FAQ
2009 US Open: Badbaadinta Socotka Beytaka Black
Maybank Championship Tournament ee Tour Tour
Wareegtada Boostada Maraykanka Open
Kuwa aasaasay LPGA: 13 Haweeney Ayaa Abuurtay LPGA
Horyaalka Mareykanka ee Amateur
108 Magacyada Rabbiga Shiva
Cadaadis Carlota ee Mexico
Waa Maxay Sannad Xun?
Noqo tartan 'Qiimaha waa sax'
Baro sida loo Aqoonsado Plasma Tusaalooyinkan
Sida Loogu Daawan karo Dhammaadka Semestarka
Maxay Tahay Saboolnimada?
Viper Powered Ram SRT-10 Gawaarida Gawaarida
Maqnaanshaha Nolol-Xumayntii hore
Midabkoodu wuxuu ka dhigan yahay riyooyin ka yimid Ilaah iyo Malaa'igta
Su'aalaha Imtixaanka Qiyaasaha - Akhrinta Meniskoos
Ku tababaro adoo isticmaalaya qaababkii hore ee nidaamyada joogtada ah iyo kuwa aan caadiga aheyn
Dib u Eegid: Kordhinta Qoyska Potenza RE970 Sida Loo Jirto
RIT GPA, SAT iyo ACT Data
Isbedelka Qaybta Sayniska Qosol
Qodobo Mucjeed ah oo ku saabsan Isbedelka
Qodobka I, Qodobka 9aad
Sidee ula macaamilaan dabaqadaha fasalka
10 Waxyaabaha Megalodon Wax Looga Yiqi Karo Dhamaan
Shan Waxyaabaha Aan Laheyn Inaad Sameyso Inta Baaskiilka
Barnaamijyada sawirada iyo Software Art
Maxay Tahay Xaqiijinta Xogta?
Raadinta Gift Gift?
Sharciga Dhiibitaanka Qalinka Qallafsan ee Maryan
Mark Labo Qod